Hevitra mandalo Resaky ny mpitsimpona akotry : raharaha am-pahendrena tsy mitaky fifankatiavana | NewsMada
Hevitra mandalo Resaky ny mpitsimpona akotry : raharaha am-pahendrena tsy mitaky fifankatiavana
Noho ny fahalalahan’ny olom-pirenena tsirairay hanana ny heviny, mety hitoetra ny tsy fifankatiavana noho ny hevitra tsy mitovy. Na izany aza samy afaka mihambo ho manana fitiavana ny firenena. Raha ny hevitra ankatoavin’ny maro (demôkrasia) no ampiharina dia tsy maintsy misy ny fitsipika mifehy ny fahazoana fitondrana mifehy ny fomba fitantanana.
Samy mipetraka ireo fitsipika ireo ary manazavazava hatrany amin’ny antsipiriany, fa araky ny hita ary mahazatra ka tsy manaitra firy intsony dia sarisariny fotsiny toy ny fanaovana azy ravaka no ametrahana ny fitsipika, ny fandinganana azy no matetika miseho. Noho izany, rariny raha araraotina ny fisian’ny korontana ankehitriny handalinana ny tsy mety ahafahana manarina ny fepetra izay tsy ahafahan’ny mpitondra manampahefana handingana ny lalàna sy fepetra mipetraka eto amin’ny tany sy fanjakana na mampiasa an’ izy ireto mifamototra amin’izay tena izy.
Tsy mila fifankatiavana ny fahafahana miresaka sy miady hevitra. Fahaiza-miaina sy fifanajana dia ampy. Mbola dingana voalohany no tsy maintsy sedraina, dia ny fametrahana rafitra ahatongavana any amin’ny fifidianana ary ny fitsipika mitantana izay rafitra izay. Noho izany, misy fahamarinana ny fandododonana ataon’ny manamboninahitra ao amin’ny tafika, zandarmaria sy polisy ho an’ny mpitarika pôlitika izay ametrahan’izy ireo adidy mikasika ny famahana ny olana mitranga ankehitriny.
Tsy tokony dia ho sarotra ny adihevitra amin’izany. Mitovy ny tanjona dia ny fitovian’ny vintana eo amin’ny fifaninanana rehefa tonga ny fifidianana. Ny mety ho sarotsarotra dia ny fikarohana izay marimaritra iraisana mikasika ny rafi-pitondrana anankinana ny fitantanana hatramin’ny fifidianana. Mandeha miandalana ny momba an’iny moa, fa mialoha an’izay mbola mipetraka izao ny fifaneken’ny andaniny sy ny ankilany momba ny fiarahan’izy ireo miray latabatra hifandinika.
Tsy azo lavina fa misy ireo efa mihevitra ho nandresy. Ny andaniny kosa na efa voatery nilefitra aza mbola tsy manaiky ho resy. Tsotra anefa angamba ny fisehon’ny toe-draharaha : mikasika ny aim-pirenena izy ity, tsy misy afaka hisarika ho azy irery intsony ka samy manaiky mialoha ny fitsaran’ ny vahoaka amin’ny fifidianana izay atrehan’ny mpiraimonina manerana ny Nosy ny fametrahana ny fitsipika mifehy an’izany fifaninanana izany.